I-eHarmony Ivula Isiza Sokwenza Umdlalo Semisebenzi… Martech Zone
Amasayithi okusesha uJobe ayishumi nambili. Baningi kakhulu abambalwa babo abazama ngisho nokuzihlukanisa ngokuthi “bayiHarmony” yemisebenzi. Ngokuvumelana ne UDkt Neil Clark Warren, umsunguli we eHarmony, “Akunjalo.” Manje inkampani yakhe inomkhiqizo osemthethweni wokukufakazela futhi yindlela ehlakaniphe kakhulu futhi eyinkimbinkimbi kunalokho ongase ucabange.
UWarren nethimba lakhe lomkhiqizo bethule Imisebenzi Ephakeme yiHarmony eLos Angeles ngesonto eledlule. (Ukudalula, bayiklayenti le-PR le- Ukuqina, ifemu engiyisebenzelayo, nge-Branded Strategies.) Ingxenyekazi ithatha indlela yokufanisa i-algorithm yomshado kusuka kwipulatifomu yabo yasekuqaleni futhi iyisebenzise enkingeni yokufaniswa nomsebenzi. Kepha bebeqaphela ukuthi bachaze ukuthi akuyona i-algorithm yokuphola / yomshado egxishwe kusayithi lokusesha umsebenzi.
"Sisebenzise ifilosofi efanayo kusuka kulwazi lwethu sakha injini ye-eHarmony futhi sabuza imibuzo efanayo mayelana nokuqhathaniswa kwemisebenzi," kuchaza uSteve Carter, oyiPhini likaMongameli Wokufanisa eHarmony, kodwa ikakhulukazi obhekele ubuchwepheshe obususelwe emisebenzini ephakeme. Yena nethimba lakhe bakha i-algorithm ehlukile ethatha idatha kumuntu ofuna umsebenzi kanye nedatha evela kubaqashi abangaba khona bese ibafanisa nezici eziyinhloko eziyi-16, kufana nezici zobudlelwano ezingama-29 ezisetshenziswa ucwaningo lwabo kumkhiqizo we-eHarmony. Izici eziyi-16 ngokuqinisekile zingabanikazi, kepha ziwela emabhakedeni amathathu amakhulu okugxilwa kuwo: Ubuntu, Amasiko Nobudlelwano.
Ngakho-ke ukuyibilisa, benze insizakalo yokufanisa umsebenzi, hhayi insizakalo yokufuna umsebenzi, izinkampani ezingayikhokha ukuze zibhalisele ngoba, ngombono, kungasiza inhlangano ukuqasha abasebenzi abalungele kangcono, babe nethuba eliningi uphumelele futhi uhlale nenkampani isikhathi eside. Lokho akukwazi ukwandisa umkhiqizo kuphela kepha kunciphisa izindleko ezimangazayo zokuqasha abantu abasha. Imali engenayo, njengoba besho emhlabeni wakwa-HR, iyinduna.
Abafuna umsebenzi bangasebenzisa isiza mahhala futhi sinohlu lwemibuzo olulindelekile lohlobo lomuntu ngenqubo yokugibela. Ukusuka lapho, leli sayithi lincoma abaqashi abangafanelana kahle nobuntu bakho, izidingo zamasiko, isipiliyoni nokunye. Uma ngabe uke wathatha umsebenzi ukuze ubone ngokushesha ukuthi awulungeli kahle noma awuthandi isiko, ungabona inzuzo yomuntu ngamunye yento enjengale.
Futhi njengoba ubungalindela kuchwepheshe wezobudlelwano, uWarren ugaxe kuzo zonke izinhlobo zokuxhumana okuthokozisayo nezibalo zokuthi uma ungajabuli emsebenzini wakho, lokho kugcwala impilo yakho yangasese, ubudlelwano, impilo nokuningi. Ngakho-ke, empeleni, Imisebenzi Ephakeme ingaphikisana ukuthi ingasiza inkampani ukuthi ibe nabasebenzi abajabule kakhulu abaphila impilo ejabule kakhulu ne-yada yada.
Imibuzo yami, engikubuza yona futhi engathanda impendulo yakho kumazwana, yile:
Ngabe ukusebenza kwengqondo yomuntu nobudlelwano kungabiliswa ngempela ku-algorithm eqhutshwa ucwaningo? Ukuba yizithameli zobuchwepheshe, ukuqagela kwami ​​ukuthi ungathi "yebo" kepha kuthiwani ngephutha lomuntu lapho ungena? Lapho ngifuna umsebenzi, ngikulungele kakhulu ukusho lokho engicabanga ukuthi inkampani ikufunayo kunalokho engikuzwayo, ukucabanga noma ukukholelwa ngami njengomuntu ozongenela ukhetho. Yize Imisebenzi Ephakeme ingamiswanga njenge-resume noma indawo yokucinga, umqondo ogcwalisa lelo fomu uzoba ngomunye walokhu, “Ngicabanga ukuthi yini engaba abaqashi abafuna ngithini?”
Izinkampani zamukela ubuchwepheshe bayo yonke into kusuka kwezokumaketha kuya ekuthengisweni kwezinto nangaphezulu. Kepha bazimisele ukuthembela kwi-algorithm yokukhetha, noma ukususa-ukukhetha, abafuna umsebenzi? Kuyiqiniso ukuthi kungcono kunokuhlola ikhasi labo le-Facebook ukuthola izithombe zobhiya, futhi ukufaniswa kwemisebenzi ephakeme ngeke kube yisinqumo sokugcina sokuqasha kunoma ngubani, kepha ukuzimisela ukutshala imali kwezobuchwepheshe imisebenzi ye-HR, empeleni?
Kwenzekani kubaqashi abakhokhelwa ukubeka abakhethiweyo lapho umdlalo wobuntu / wesiko / wobudlelwano ungasebenza ngokumelene nabafuna umsebenzi?
Indlela enjengale ingahamba ibanga elingakanani? Singakwazi yini ukwakha i-algorithm yokufanisa ama-ejensi namakhasimende? (Ngingathanda ukubona leyo datha. Heh.) Impela indlela efanayo ingasebenza ebudlelwaneni bomthengisi nakubalingani. Kepha kudinga izinga elithile lokuhlolwa okuvela eceleni kwezinhlangano ezithintekayo. Zingaki izinkampani ezizovula iminyango yazo ekuhlolweni kobuntu benhlangano?
Ngithola Imisebenzi Ephakeme ithakazelisa. Kuzoba mnandi ukuyibona isebenza. Ngakho-ke umbuzo wangempela uhlala: Ucabangani? Ungayisebenzisa njengomphathi wokuqasha uma ngabe uyakwazi ukufinyelela? Ungayisebenzisa njengomuntu ofuna umsebenzi? Okuphawulayo kungokwakho.
Tags: algorithmeHarmonyimisebenzi ephakemeUbuchwepheshe be-HRumnyango Wabasebenziukufanisa umsebenziubuchwepheshe obufanayo
IJason Falls iyi-SVP yeDigital Strategy ku Ukuqina, inkampani yokuthengisa edijithali enamahhovisi eSt. Louis, Chicago naseLouisville. Umbhali wezincwadi ezimbili zokumaketha kwedijithali, isikhulumi esivamile esihlokweni esihlokweni kanye nomhlaziyi wezobuchwepheshe bezenhlalo. Xhuma naye ku jasonfalls kumanethiwekhi amaningi omphakathi.
Indlela Engcono Kakhulu Yokuphatha Ama-akhawunti E-Twitter Amaningi
Ngo-Apr 11, i-2016 ku-11: 23 AM
UJason - ingabe ikhona i-URL yesayithi elisha?